Golaha naafada Qaranka oo wada-tashi looga hadlayey Qabyo-Qoraalka sharciga naafada ku soo gabogabeeyey magaalada Samo-reeb “SAWIRRO” | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Golaha naafada Qaranka oo wada-tashi looga hadlayey Qabyo-Qoraalka sharciga naafada ku soo gabogabeeyey magaalada Samo-reeb “SAWIRRO”
Kulankaan oo muddo seddex maalmood ah ka socanayey magaalada Samoreeb ee xarunta Galmudug ayaa ku saabsanaa wada-tashiga qabyo qoraalka Sharciga Naafada Soomaaliyeed, waxaana maanta looga hadlay Wada-tashiga iyo Wacyigalinta Xuquuqda Naafada.
Kulanka oo maanta lasoo gabogabeyey ayaa waxaa soo qabanqaabiyey Golaha Naafada Qaranka Soomaaliyeed, iyadoo ay ka soo qayb galeen Dadka baahiyaha Gaarka ah qaba, Xildhibaanno, Wasiiro, Maamulka magaalada Samoreeb iyo xubno ka socday Golaha Naafada Qaranka Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee magaalada Samoreeb Cabdi Jiirow Dhudi oo ugu horayn ka hadlay madasha ayaa xusay in wax laga qabto tabashooyinkooda, ayna soo dhowaynayaan sharcigan qabya-qoraalka ah siddii loo dhameystiri lahaa.
Sayid Cali Cabdullaahi Guddoomiyaha Golaha Naafada Qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay ina dadka Naafada ah ay Xuquuq ku leeyihiin Qaranka, ayna magaalada Samoreeb ku arkeen inaysan Dadkani lahayn xarun ugaar ah.
Guddoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Caasimada Galmudug Cabdi Xaashi Caroole ayaa xusay in maamulka magaalada Samoreeb uu caawin doono dadka Baahiyaha Gaarka ah qaba.
Ugu dambeyn waxaa kulanka ka hadashay Xildhibaan Canab Maxamed Cosoble oo ka tirsan Baarlamaanka Galmudug, waxa ayna xustay in Dadkaan Xaruntii ay lahaayeen si dhaqso ah loo dhiso.
Dadka baahiyaha Gaarka ah qaba ee Deegaanada Galmudug ayaa waxa ay samaysteen Guddiyo ay ku midaysan yihiin, kuwaasi oo u dooda, kana shaqeeya siddii ay ku heli lahaayeen xaquuqdooda aas aasiga ah.
Golaha naafada Qaranka oo wada-tashi looga hadlayey Qabyo-Qoraalka sharciga naafada ku soo gabogabeeyey magaalada Samo-reeb “SAWIRRO” was last modified: September 10th, 2020 by Admin
Dab xoog leh oo mar kale ka kacay Dekadda Beirut ee Lubnaan